႐ုရွားကို ေလယာဥ္အပိုပစၥည္းေတြေရာင္းဖို႔ တ႐ုတ္ဘက္ကျငင္းတဲ့သတင္းထြက္လာ ( ပူတင္ႀကီးကို သာေကာတို ့သစၥာေလာက္ၿပီလား…. )
ရုရှားကို လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့ တရုတ်ဘက်ကငြင်းတဲ့သတင်းထွက်လာ ( ပူတင်ကြီးကို သာကောတို ့သစ္စာလောက်ပြီလား…. )
တရုတ်နိုင်ငံက ရုရှားကို လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းတွေ ရောင်းချဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ရုရှားလေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ကိုးကားပြီး ရုရှားသတင်းဌာနတွေက ဒီကနေ့ ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန်အခြေစိုက် Boeing နဲ့ ဥရောပအခြေစိုက် Airbus ကုမ္ပဏီတွေက ရုရှားကို လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းတွေ ရောင်းချမှု ရပ်တန့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် တရုတ်ဘက်ကလည်း အလားတူ လုပ်ဆောင်တဲ့သတင်း ထွက်လာတာပါ။
ရုရှားက ယူကရိန်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေက ရုရှားအပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရုရှားရဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်လာနေရတာပါ။ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာနကလည်း ရုရှားရဲ့ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေပျံသန်းမှု ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဝယ်လို့မရတော့တဲ့အတွက် တူရကီ၊ အိန္ဒိယနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကနေ ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း ရုရှားက ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေ ပျံသန်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိ ပြင်ဆင်စစ်ဆေးရတဲ့ဌာနက အရာရှိဖြစ်သူ Valery Kudinov ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး အစိုးရပိုင် Interfax သတင်းဌာနအပါအဝင် ရုရှားသတင်းဌာနတွေမှာ ရေးသား ဖော်ပြကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ရုရှားလေယာဉ်အတော်များများဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေက ရုရှားလေကြောင်းလုပ်ငန်းအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ရုရှားကို ပြန်ရောက်လာကြပေမယ့်လည်း အဲဒီလေယာဉ်တွေဟာ သူတို့ ငှားထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆီ ပြန်အပ်ကြမယ်လို့ သူမျှော်လင့်ကြောင်းလည်း Valery Kudinov က ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေက ငှားသုံးနေတဲ့ ပြည်တွင်းလေကြောင်းကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ရမ်းခကို ရုရှား ရူဘယ်လ်ငွေနဲ့ပေး ဖို့နဲ့ တကယ်လို့ ငှားထားတဲ့စာချုပ် ပျက်သွားခဲ့ရင် အဲဒီလေယာဉ်တွေ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကို ပြန်အပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မယ့် ဥပဒေကြမ်းကို ရုရှားအစိုးရက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရုရှားကို လယောဉျအပိုပစ်စညျးတှရေောငျးဖို့ တရုတျဘကျကငွငျးတဲ့သတငျးထှကျလာ ( ပူတငျကွီးကို သာကောတို့သစ်စာလောကျပွီလား…. )
တရုတျနိုငျငံက ရုရှားကို လယောဉျအပိုပစ်စညျးတှေ ရောငျးခဖြို့ ငွငျးဆိုခဲ့တယျလို့ ရုရှားလကွေောငျးဆိုငျရာ အာဏာပိုငျတှကေို ကိုးကားပွီး ရုရှားသတငျးဌာနတှကေ ဒီကနေ့ ပွောပါတယျ။ ဒါဟာ အမရေိကနျအခွစေိုကျ Boeing နဲ့ ဥရောပအခွစေိုကျ Airbus ကုမ်ပဏီတှကေ ရုရှားကို လယောဉျအပိုပစ်စညျးတှေ ရောငျးခမြှု ရပျတနျ့လိုကျပွီးတဲ့နောကျ တရုတျဘကျကလညျး အလားတူ လုပျဆောငျတဲ့သတငျး ထှကျလာတာပါ။
ရုရှားက ယူကရိနျးကို ဝငျရောကျတိုကျခိုကျနတောကွောငျ့ အနောကျအုပျစုနိုငျငံတှကေ ရုရှားအပေါျ ဒဏျခတျ အရေးယူမှုတှေ ခမြှတျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ရုရှားရဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှလေညျး အခကျအခဲနဲ့ ရငျဆိုငျလာနရေတာပါ။ ရုရှားနိုငျငံခွားရေးဌာနကလညျး ရုရှားရဲ့ ခရီးသညျတငျလယောဉျတှပြေံသနျးမှု ဘေးကငျးလုံခွုံရေးအတှကျ စိုးရိမျစရာရှိကွောငျး ပွောပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံကနေ ဝယျလို့မရတော့တဲ့အတှကျ တူရကီ၊ အိန်ဒိယနဲ့ တခွားနိုငျငံတှကေနေ ဝယျယူဖို့ ကွိုးစားနကွေောငျး ရုရှားက ခရီးသညျတငျလယောဉျတှေ ပြံသနျးနိုငျခွငျးရှိမရှိ ပွငျဆငျစစျဆေးရတဲ့ဌာနက အရာရှိဖွစျသူ Valery Kudinov ရဲ့ ပွောကွားခကြျကို ကိုးကားပွီး အစိုးရပိုငျ Interfax သတငျးဌာနအပါအဝငျ ရုရှားသတငျးဌာနတှမှော ရေးသား ဖောျပွကွပါတယျ။
နိုငျငံခွားတိုငျးပွညျမှာ မှတျပုံတငျထားတဲ့ ရုရှားလယောဉျအတောျမြားမြားဟာ အနောကျနိုငျငံတှကေ ရုရှားလကွေောငျးလုပျငနျးအပေါျ ဒဏျခတျပိတျဆို့မှုတှေ ခမြှတျလိုကျပွီးတဲ့နောကျ ရုရှားကို ပွနျရောကျလာကွပမေယျ့လညျး အဲဒီလယောဉျတှဟော သူတို့ ငှားထားတဲ့ ကုမ်ပဏီတှဆေီ ပွနျအပျကွမယျလို့ သူမြှောျလငျ့ကွောငျးလညျး Valery Kudinov က ပွောပါတယျ။
တခြိနျတညျးမှာပဲ ပွငျပကုမ်ပဏီတှကေ ငှားသုံးနတေဲ့ ပွညျတှငျးလကွေောငျးကုမ်ပဏီတှအေနနေဲ့ ရမျးခကို ရုရှား ရူဘယျလျငှနေဲ့ပေး ဖို့နဲ့ တကယျလို့ ငှားထားတဲ့စာခြုပျ ပကြျသှားခဲ့ရငျ အဲဒီလယောဉျတှေ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီကို ပွနျအပျခှငျ့ ပိတျပငျကနျ့သတျမယျ့ ဥပဒကွေမျးကို ရုရှားအစိုးရက ဒီကနေ့ ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။